Ahoana ny fomba hanafoanana ny fanairana fiofanana amin'ny Apple Watch | Vaovao iPhone
Ahoana ny fomba hamonoana ny fanairana fiofanana amin'ny Apple Watch
Jordi Gimenez | 26/10/2021 12:00 | Apple Watch, Fampianarana sy torolàlana
Io no iray amin'ireo fanontaniana apetraky ny sasany aminareo matetika ary izany no nahatonga anay nanapa-kevitra ny hamorona ity fampianarana kely ity. Raha ny marina, io asa io amin'ny toe-javatra sasany dia navitrika tsy fidiny ao amin'ny firafitry ny famantaranandro ary mora ny manafoana.
Raha ny amiko, dia navitrika ho azy (na mety navitrika aho nefa tsy fantatro) tamin'ny dikan-teny farany navoakan'ny rafitra fiasan'ny watchOS. Maro aminareo no tsy manana izany mavitrika fa tsara ihany koa ny mahafantatra ny fomba hanesorana ireo fampitandremana "fiatoana fanazaran-tena" na "fanatanjahan-tena vita", ankoatra ny hafa.
Apple Watch dia afaka mampandre anay amin'ny fotoana manokana fanofanana ary mety hihena izany. Safidy iray izay raha ny amiko dia navitrika irery, tsy nanamboatra azy io aho na oviana na oviana. Ankehitriny dia hojerentsika ny fomba fampahavitrihana na famonoana azy amin'ireto dingana tsotra ireto. Ity hetsika ity dia azo atao amin'ny fiambenana na avy amin'ny iPhone, ho hitantsika aloha ny fomba hanafoanana ireo fampandrenesana na fampitandremana avy amin'ny iPhone:
Manokatra ny fampiharana Watch izahay amin'ny iPhone
Tsindrio ny safidy fanofanana
Mihodina miakatra izahay ary mitady ny safidy farany: Valin'ny feo
Amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa manondro mazava izany Siri dia afaka mamaky antsika fanamarihana momba ny fiofanana. Atsipazo na ahetsiketsika ary izay ihany. Raha te hanao an'io fampahavitrihana na fanafoanana mivantana avy amin'ny Apple Watch io dia tsy maintsy manaraka ny dingana mitovy isika fa amin'ny fiambenana.
Manindry ny satroboninahitra nomerika izahay ary miditra amin'ny Settings. Rehefa ao anatiny dia mitady fotsiny ny fampiharana fiofanana ary midina any tadiavo ny safidy «Voice responses» izay no safidy tsy maintsy ahetsiketsika na amin'ity tranga ity dia deactivate. Angamba toa ahy ianao dia navitrika ity safidy ity nefa tsy tonga saina na navitrika ho azy aza, ny zava-dehibe dia ny mahafantatra hoe aiza no tokony haleha mba hanesorana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fomba hamonoana ny fanairana fiofanana amin'ny Apple Watch
Ny tsaho vaovao dia manondro fiovana kely indrindra amin'ny fanavaozana ny iPhone SE 3 (na SE Plus)
Inona no vaovao ao amin'ny iOS 15.1